डा. केसीविरुद्ध पूर्वमा प्रदर्शन, सरकारी सेवा लिएर राजनीति नगर्न सुझाव - Dainik Nepal
डा. केसीविरुद्ध पूर्वमा प्रदर्शन, सरकारी सेवा लिएर राजनीति नगर्न सुझाव
दैनिक नेपाल २०७५ पुष ३० गते २०:४५
इलाम, ३० पुस । यहाँ छ दिनदेखि अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै युवा विद्यार्थीले सोमबार जुलुस निकालेका छन् ।
उहाँले डा केसीले सयमा सय माग पूरा हुनुपर्छ भन्नु ‘बालहठ’ भएको भन्दै तत्काल अनशन तोड्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । यस्तै सभामा सम्बोद्धन गर्दै अर्का विद्यार्थी ईश्वरी तामाङले सबै जनताका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय नमान्ने अधिकार कसैको नभएको जानकारी दिनुभयो । –रासस
छिमेकीका विषयमा हलुका टप्पणी नगरौँ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
कक्षा ९ देखि १२ सम्म योग शिक्षा लागू गर्न सुझाव